Shiinaha oo xaqiijiyay kiiskii ugu horreeyay ee aadanaha ee hargabka H7N4. - Wardeeq 24 TV Shiinaha oo xaqiijiyay kiiskii ugu horreeyay ee aadanaha ee hargabka H7N4. Wardeeq 24 TV
Home Caafimaad-ka Shiinaha oo xaqiijiyay kiiskii ugu horreeyay ee aadanaha ee hargabka H7N4.
Shiinaha oo xaqiijiyay kiiskii ugu horreeyay ee aadanaha ee hargabka H7N4.
Wadanka Shiinaha ayaa la xaqiijiyay kiiskii ugu horreeyay ee aadanaha ee fayraska H7N4 bird flu hargabka halista ah ee shimbiraha, gaar ahaan digaaga, taasoo keentay in Hong Kong ay soo saarto digniin caafimaad oo loogu talagalay dadka ku safraya dhulwaynaha inta lagu jiro fasaxa sanadka cusb ee Lunar.
Cudurka Feyruska ayaa lagu ogaaday haweeney 68-jir ah oo ka timid gobolka bari ee Jiangsu oo la dhigey cusbitaal ka dib markii ay xanuunsatay 25-kii December, laakiin tan iyo markaas laga daweeyay kana bogsootay, sida ay sheegeen Guddiga Qorsheynta Qoyska iyo Caafimaadka Qaranka ee Shiinaha.
Gudiga ayaa sheegay in bukaanku uu xiriir la yeeshay digaaga nool ka hor inta aan calaamadaha la ogaanin ka dib markii lagu soo wargeliyay kiiska Xarunta Hong Kong ee Ilaalinta Caafimaadka in jeermiska uu ka yimid asalka fayraska avian.
Kiisaska ugu horreeya dunida ee hargabka shimbiraha oo ku dhaca aadanaha ayaa lagu sheegay Hong Kong 1997, markii lix qof u dhinteen hargabka H5N1 ee fayraska.
Boqolaal kale ayaa sidoo kale ku dhintay adduunka oo dhan marka uu ka dillaacay, gaar ahaan cudurrada aadka u sareysa sida H7N9.
Previous articleMowqifka Puntland ee muddo kordhinta Hay’adaha Dowladda Federaalka
Next articleKenya waxaa markale oo mamnuucday hilibka laga keeno Koonfur Afrika iyadoo laga cabsi qabo faafitaanka cudurka listeria